Staying Anonymous (part two) | Shwekoyantaw
Published : 6:53 AM Author : shwekoyantaw
ဒီနေ့တော့ နောက်ထပ်တစ်ပိုင်းအနေနဲ့ ကျွန်တော် သိသလောက်ဆက်လက်တင်ပြသွားမှာပါ..ဒီတစ်ခါလဲအမွှားပါသွားရင် ခွေးလွတ်ပေးစေချင်ပါတယ်...။
အရင်တုန်းက offline protection ဆိုတော့ အခု နောက်တစ်ပိုင်းအနေနဲ့ online protection ပေါ့...။
Types of online protection
တစ်မျိုးအားဖြင့် ကျော်မယ်ခွမယ် IP ပြောင်းမယ်ဆိုရင်သုံးတယ်ဗျ...။ဘယ်လိုပြောရမလဲဆိုတော့ သူဟာ
network တစ်မျိုးဖြစ်ပြီးတော့ အဓိကအားဖြင့် public telecommunication infrastructure ဖြစ်ပါတယ်...။
ပြောမယ်ဆိုရင် အများလည်းသုံးရတဲ့ network တစ်မျိုးဖြစ်ပြီးတော့ ကျွန်တော်တို့ websites တွေဝင်ရောက် တဲ့အခါ လုံခြုံမှုကိုပေးပြီးတော့ IP တွေကိုလဲ ဖျောက်ဖျက် ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်....ဥပမာအားဖြင့် Myanmar နိုင် ငံက IP ကို US က IP အဖြစ်ပြောင်းလဲနိုင်မှာပါ....။ဘလော့ဂါတွေအတွက်လဲ အခက်အခဲမရှိ ကျော်ခွ သုံးနိုင် ပါတယ်...ဥပမာ skynet လိုင်သုံးတဲ့သူမျိုးတွေအတွက် တကယ်အသုံးတဲ့ပါတယ်...ဘလော့ဂါတိုင်းဆောင် ထားသင့်ပါတယ်....။ လူအများနဲ့ သုံးလို့ရတာကြောင့် အကောင့်တစ်ခုကို လူအများကြီး သုံးဆွဲရင် Bandwith မနိုင်ရင်အသုံးပြုရတာလေးကန်နိုင်ပါတယ်.....။
HTTP Proxies and SOCKS5
ကျွန်တော်တို့ အနေနဲ့ ပရုပ်ဆီပြောင်းပြီး လိုင်းပေါ်မှာနေရာပြောင်းနိုင်ပါသေးတယ်...မြောက်များစွာသော
ပရုပ်ဆီ List တွေကို အောက်ပါနေရာများကနေ အလကာရယူလိုက်ပါ....။
မှတ်ချက် Hide My Ass proxy တွေကို Hacking လုပ်တဲ့နေရာမှာမသုံးရ...။
Hackforums မှ proxy lists များကို ဒီနေ ရာမှာရနိုင်သေးပါတယ်....။
Premium and Private SOCKS5 တွေအတွက်ကတော့ Google search မှာရှာဖွေလေ့လာနိုင်ပါသေး
Tor ဆိုတာအလာရတဲ့ free software ဖြစ်ပါတယ်....သင့် secure browsing တွက်လိုအပ်တဲ့ဆော့ဝဲပါ...
Hide anonymous လုပ်နိုင်တဲ့အပြင် မိမိ IP address ကိုပါနေရာရွေ့ နိုင်ပါသေးတယ်..။
SSH Tunneling ကိုအသုံးပြုဖို့ အောက်ပါ ဆော့ဝဲတွေ လိုအပ်ပါတယ်.....။
2.ပြီးရင် Text Box မှာ သင့် IP address ကိုထည့်ရပါမည်...။
3.ပြီးရင် ဘယ်ဘက် အခြမ်းက အကွက်ထဲက List တွေထဲမှာ အောက်ဆုံးနာလောက်မှာ SSH ဘေးက '+'
4. Tunnels ကိုကလစ်လိုက်ပါ...
5. သင် Port ကိုထည့် ရမှာဖြစ်ပြီး Dynamic ကိုကလစ်လိုက်ပါ။
6. ပြီးရင် ADD နဲ့ Open ကိုကလစ်လိုက်ပါ...။ connection ရအောင်ဆက်သွယ်ပါလိမ့်မယ်..
7. ရပြီဆိုရင်သင့် Browser ထဲကိုသွားပြီး IP ကို 127.0.0.1 လို့ထည့်ပြီး port ရိုက်သွင်းပါ..။
8. ဒီအဆင့်တွေပြီးရင် သင့် Browser ကိုအသုံး ပြုနိုင်ပါပြီ..။
ကျွန်တော်ကဘာသာပြန်ပြီးရေးတာဆိုတော့ အမှားတွေ ပါနိုင်ပါတယ် ဒါ့ကြောင့် လက်သယ် ချည်းပဲ အား ကိုးမနေပါနဲ့ မှုရင်းဆိုက်မှာလဲ တစ်ချက်လောက်ဝင်ကြည့်နိုင်ပါတယ်...။
Ebook For Staying Anonymous
နောက်ပြီး Staying Anonymous အတွက် စာအုပ် English version တစ်အုပ်ရှိပဲသေးတယ် တစ်ခါတည်း တွဲတင်ပေးလိုက်တာ အောက်ပါနေရာက ဒေါင်းနိုင်ပါတယ်....
နောက်ပြီး Auto Hide IP ဆိုတာလေးပါ တစ်ခါတည်းလင့်ချိတ်ပေးလိုက်တယ်....သုံးလို့တကယ်ကောင်း
တစ်ခုပြောချင်တာက ဒီလောက်ပုန်းနေလဲရှာနိုင်တဲ့ဟာတွေရှိပါသေးတယ်...။ကျွန်တော်က အစပျိုးပေးလိုက်တာပါ နောက်ထပ် ဆက်လက်လေ့လာကြပါလို့ပြောချင်ပါတယ်...။တကယ်တမ်းကျွန်
တော်လဲလေ့လာဆဲသူတစ်ယောက်ပါ ဘာမှကိုမတတ်သေးပါဘူး ...။အမှာပါရင်ခုထဲက တောင်းပန်ရင် နဲ့
PS: လင့်များမကောင်းရင် Cbox ထဲမှာ ရေးသွားနိုင်ပါတယ်....
Labels: defence, ip adress, knowledge, network, tools, tutorial |